Iindaba-Ukuhlelwa kokudaywa okusebenzayo
Ngokwamaqela ahlukeneyo asebenzayo, iidayi ezisebenzayo zinokwahlulwa zibe ziindidi ezimbini: uhlobo lwe-symmetrical triazene kunye nohlobo lwevinylsulfone.
Uhlobo lwe-Symmetric triazene: Kulolu hlobo lweedayi ezisebenzayo, iimpawu zeekhemikhali ze-athomu zeklorini ezisebenzayo zisebenza ngakumbi.Ngexesha lenkqubo yokudaya, iiathomu zeklorini zitshintshwa ziifiber ze-cellulose kwi-alkaline medium kwaye zibe ngamaqela ashiyayo.Ukusabela phakathi kwedayi kunye nefiber cellulose yi bimolecular nucleophilic substitution reaction.
Uhlobo lweVinyl sulfone: vinyl sulfone (D-SO2CH = CH2) okanye i-β-hydroxyethyl sulfone sulfone.Ngexesha lenkqubo yokudaya, i-β-hydroxyethyl sulfone sulfate iyancipha kwi-alkaline medium ukwenza iqela le-vinyl sulfone.Iqela le-vinyl sulfone lidibanisa ne-cellulose fiber ukuze lingene kwi-nucleophilic addition reaction reaction ukwenza i-covalent bond.
Iidayi ezimbini ezisebenzayo ezikhankanywe ngasentla zezona ndidi ziphambili zedayi ezisebenzayo ezinemveliso enkulu emhlabeni.Ukuze kuphuculwe izinga lokulungiswa kwedayi ezisebenzayo, amaqela amabini asebenzayo aye angeniswa kwimolekyuli yedayi kwiminyaka yakutshanje, eziziidayi ezimbini ezisebenzayo.
Idayi ezisebenzayo zinokwahlulwa zibe zithotho ngokwamaqela awo ahlukeneyo asebenzayo:
1. Idayi esebenzayo yohlobo lwe-X iqulethe iqela elisebenzayo le-dichloro-s-triazine, eliyidayi eliphantsi lobushushu elisebenzayo, elilungele ukudaya i-fiber cellulose kwi-40-50℃.
2. Idayi esebenzayo yohlobo lwe-K iqulethe iqela elisebenzayo le-monochlorotriazine, eliyidayi ephezulu yokushisa esebenzayo, ilungele ukuprintwa kunye nokudaya kwe-pad ye-cotton fabrics.
3. Iidayi zohlobo lwe-KN ezisebenzayo ziqulathe amaqela asebenzayo e-hydroxyethyl sulfone sulfate, eziyidayi ezisebenza ngobushushu obuphakathi.Ubushushu bokudaya yi-40-60℃, ilungele ukudaya umqulu womqhaphu, ukudaya isambuku esibandayo, kunye noshicilelo lwedayi ebuyela umva njengombala ongasemva;ikwalungele ukudaywa kwempahla yehemp.
4. Idayi esebenzayo yohlobo lwe-M iqulethe amaqela aphindwe kabini kwaye ingokwedayi esebenzayo yobushushu obuphakathi.Ubushushu bokudaya ngama-60°C.Kufanelekile ukuprintwa kobushushu obuphakathi kunye nokudaya kwekotoni kunye nelinen.
5. Iidayi zohlobo lwe-KE ezisebenzayo ziqulathe amaqela aphinda-phindeneyo aphindwe kabini kwaye zezedayi ezinobushushu obuphezulu obusebenzayo, ezilungele ukudaya umqhaphu kunye namalaphu elinen.
1. Idayi inokusabela kunye nefiber ukwenza ibhondi edibeneyo.Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, olu luhlu aluyi kuhlukana, ngoko ke xa idayi esebenzayo idayiwe kwifiber, iya kuba nombala omhle wokukhawuleza, ngakumbi unyango olumanzi.Ukongeza, i-fiber ayiyi kuba brittle njengedayi ye-vat emva kokudaya.
2. Inomgangatho olungileyo wokusebenza, imibala eqaqambileyo, ukukhanya okulungileyo, kulula ukuyisebenzisa, ichromatogram epheleleyo, kunye nexabiso eliphantsi.
3. Iyakwazi ukuveliswa ngobuninzi e-China, enokuthi ihlangabezane ngokupheleleyo neemfuno zeshishini lokuprinta kunye nokudaya;inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa, kungekuphela nje ukudaywa kweefiber ze-cellulose, kodwa kunye nokudaywa kweeprotheyini zemicu kunye namanye amalaphu adibeneyo.
SingaBaboneleli beDayi abaSebenzayo.Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
I-Acrylic Seaping Agent, T Shirt Elastic White Silk Ink, Abancedisi beMichiza, Ubushushu obuphezulu bePigment, Ukukhupha Cola iBinder, Hlamba-Sisasazekile Thickener,